January 9, 2019	150	Like
January 2, 2019	199	1
January 2, 2019	141	1
January 2, 2019	241	Like
Garoowe (Codka Nabadda) Tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaa caado noqotay in siyaasada iyo ganacsiga Puntland isku milmaan. Waxaa xusid mudan in muwadin kasta oo Puntlander ah laga qaado 60$ markasta uu ka duulayo garoomada diyaaradaha, lacagtaas oo gacanta...
Ciidamo Soomaali iyo kuwo Mareykan ah oo howlgal ka fuliyay Xarunta ugu weyn Al-Shabaab
December 30, 2018	69	Like
Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya oo ay wehliyeen Ciidamo Mareykan ah ayaa howlgal gaar ah ka fuliyay xarun Al-Shabaab ku lahaayeen degmada Jilib ee Gobolka Jubadda Dhexe. Taliyaha qeybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Jen. Cali Maxamed Maxamuud Bogmadow ayaa sheegay in...
Waa sidee xaalada deegaannadii ay dagaalladu ka dhaceen ee gobolka Galguduud
December 30, 2018	60	Like
Waxaa xaaladda degenaasho laga soo sheegayaa deegaanka Kaxandhaale ee xadka gobolka Galguduud uu la wadaago dalka Itoobiya oo labadii cisho ee la soo dhaafay ay ka socdeen dagaallo culus oo u dhaxeeya labo maleeshiyo beelleed. Wafdiga uu horkacayo Wasiirka Wasaarradda...